सेमील्ट विशेषज्ञले वेब स्क्रैपिंगको भविष्यको भविष्यवाणी गर्दछ
वेब स्क्रैपिंग नेट बाट डाटाको संग्रहको लागि सामान्य प्रविधि हो।. यो भनेको मात्र महत्त्वपूर्ण छ एक ठूलो विचलन हो. यो बस अपरिहार्य छ. सूचना शक्ति हो, र कुनै पनि संगठनको कमी छ कि यो विकृत छ, त्यसैले वेब स्क्रैपिंग रगत हो जुन सबै प्रकारका अनलाइन कारोबारहरू दौडिरहेका छन्। - giochi di saltare sul letton.
चाहे यो गैर सरकारी संगठन हो, एक लाभकारी संगठन, एक स्टार्टअप, एक मध्यम उद्यम, वा एक फर्च्यून 500 कम्पनी हो, यो निश्चित रूपले एकत्रित जानकारी चलाउँछ।. त्यसो त, वेब स्क्रैपिंगको महत्व बढि जोडिएको हुन सक्दैन.
कर्पोरेट संसारमा प्रतिस्पर्धा अब यो भन्दा सजिलो भएको छैन. विभिन्न उद्योगहरूमा खेलाडीहरू अब हतियारमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रत्येक ह्यान्ड्स प्रयोग गर्छन्. भर्खरै, संस्थाहरूले आफ्नो प्रतियोगीलाई लड्नको लागि हतियारको रूपमा स्क्रैपिंग वेब प्रयोग गर्न थाले. आखिर, तपाईसँग तपाईका विरोधीहरूको भन्दा बढि सान्दर्भिक जानकारी छ भने, तपाईंसँग उनीहरूको फायदा हुनेछ. ज्ञान, तिनीहरू भन्छन्, शक्ति हो. यद्यपि वेब स्क्रैपिंग उद्योगले धेरै समाधानहरू भरिएको छ, तिनीहरू केवल3कोटिमा सामूहिक हुन सक्छन्, र तिनीहरू हुन्:
(1 9) आफ्नै डेटा निकासी आवेदन वा सफ्टवेयर आफैलाई वा प्रोग्रामरहरू भर्ती गरेर
( 1 9) तेस्रो-पक्ष वेब स्क्रैपिंग सेवाहरूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ
(1 9) एक सामान्य डेटा निकासी सफ्टवेयर खरिद गर्दै
सबै तीन समाधानहरू उनीहरूको फाइदाहरू र हानिहरू छन्।. यसबाहेक, कुनै पनि कम्पनीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समाधान कोटीले वेबको व्यापारको आवश्यकताहरु लाई खरिद गर्दछ.
प्रत्येक अन्य प्रविधिको जस्तो, वेब स्क्रैपिंग विकास र निरन्तर जारी रहनेछ. त्यसैले, यो लेख वेब स्क्रैपिंग को भविष्य मा केंद्रित छ. अगाडी जानु अघि, यो स्पष्ट गर्न को लागी कि वेब स्क्रैपिंग को भविष्य को बारे मा यस लेख मा उठाएको राय केवल कल्पनाशील र कल्पनात्मक संभावनाहरु हो. दिमागमा दिमागमा, यहाँ, (2 9) वेब निष्कर्ष को भविष्य विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ.
कृत्रिम खुफिया परिप्रेक्ष्यबाट
जीवनको हरेक क्षेत्रमा कृत्रिम ज्ञान प्रयोग गरिरहेको बेला, यो मानिएको छ कि यो प्रविधिको प्रायः भविष्यमा वेब स्क्रैपिंगको लागि प्रयोग गरिनेछ।. अन्य शब्दहरूमा, बुद्धिमान रोबोटहरू वा मशीनहरू मनिटर गर्न बनाइनेछ र विभिन्न कम्पनीहरूको लागि नियमित आधारमा स्क्रैप डेटा सिर्जना गरिनेछ।.
निस्सन्देह, रोबोटहरू पहिले नै वेब स्क्रैपिंगका लागि प्रयोग गरिँदै छन्, तर ती मध्ये कुनै पनि मानव हस्तक्षेप बिना लक्षित वेबसाइटहरूमा प्रमुख परिवर्तनहरू गर्न सक्दैनन्।. उदाहरणका लागि, यदि लक्षित साइट परिवर्तनको लेआउट, विद्यमान (3 9) वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू प्रयोगकर्ताले थोडा साटोको साटो बिना साइट स्क्रैप गर्न सक्नेछैन।. यो भविष्यमा सुपर-बुद्धिमान वेब स्क्रेकिंग रोबोटहरूको लागि समस्या हुनेछैन किनभने तिनीहरू वेबमार्फत कुनै लक्षित परिमार्जन गर्न कुनै पनि परिमार्जन गर्न प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्।. तिनीहरू चाँडै सिर्जना गरिनेछ यदि तिनीहरू पहिले नै सिर्जना गरिदैनन्.
सबैभन्दा ठूलो वेब स्क्रैपर Google हो किनभने यसको मुख्य व्यवसाय वेबसाइटहरू क्रल र स्क्रैप गर्न र यो होस्ट गरिएको वेबसाइटहरू र ती सबै लिङ्कहरू. यो Google ले वेब स्क्रैपिंग सेवाहरू प्रस्तुत गर्न सुरु गर्न पछि लाग्दछ. र यदि यो गर्छ भने, यो सबैभन्दा ठूलो र सर्वोत्तम वेब कम्पनी स्क्रैपिंग हुनेछ किनभने यसले पहिले नै वेब स्क्रैप गर्दछ. ग्राहकहरू केवल लक्षित वेब पृष्ठको URL सूचीबद्ध गर्न आवश्यक छ, र तिनीहरूले Google बाट आवश्यक सबै सामग्री प्राप्त गर्नेछन्. सबै पछि, सबै वेबसाइटहरूको सामग्री पहिले नै यसको अनुक्रमणिकाको डाटाबेसमा छ.
वेब स्क्रैपिंग सेवाहरू प्रस्तुत गर्न सुरु गर्न Google को अर्को कारण यो हो कि यसको साथ हत्या गर्न को लागी यो सानो वा कुनै अतिरिक्त प्रयासको आवश्यकता पर्नेछ।. कम्पनीले पहिले नै वेबसाइटहरू स्क्रैपिंग बृद्धि गर्छ. हातमा आवश्यक डेटा भएको बेला सबैले Google ले वेब प्रस्ताव प्रदान गर्दछ कि टर्नराउन्ड गर्दा अन्य सेवा प्रदायकहरू मेल खाँदैनन्।.
Google ले अतिरिक्त प्रयासको साथ सेवा प्रस्ताव गर्न सक्षम भएदेखि, यो प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू पनि प्रदान गर्न सक्छ जुन कुनै संगठनले मेल खाँदैन।. जस्तै कि खोज इन्जिन उद्योगमा कम्पनीले प्रायः कसरी लिईएको छ, Google ले अन्ततः वेब स्क्रैपिंग क्षेत्रको साथ लिन सक्छ. बाधाहरू यसको पक्षमा राम्रो छन्.
विश्लेषण र संगठनको परिप्रेक्ष्यबाट
फरक फरक पर्दैन कि तिनीहरू कति महसुस हुन्छन्, जूता बिना पैर बिना बेकार हुन्छन्. त्यसोभए, डेटाले खराब विश्लेषण विश्लेषणका साथ संगठनलाई धेरै प्रयोगको हुन सक्दैन. वास्तव मा, डेटा आफैले यति आवश्यक छैन, यो तपाईं कसरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यसैले, कम्पनीहरूले आफ्नो वेब स्क्रैपिंग प्रयासमा तीव्रता दिइरहेका छन् भने, उनीहरूले अत्यधिक अनुशंसित डेटा विश्लेषकहरुलाई भर्ना गर्न वा आफ्नो डेटा को संगठनमा आफ्नो कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिन को लागी अधिक स्रोतहरु लाई नष्ट गर्न शुरू गर्नेछन्, र डेटा विश्लेषण.
एउटै डेटा दिईएको छ, केहि संस्थाहरूले यसको भन्दा अरु भन्दा राम्रो प्रयोग गर्नेछ. यो मात्र हो किनकि तिनीहरूले सँगै राम्रो डेटा विश्लेषण कुञ्जीहरू छन्. त्यसैले, वेब स्क्रैपिंगको भविष्य निश्चित रूपमा डेटा संगठन र विश्लेषणको लागि आवश्यकतालाई प्रभावित गर्नेछ.
विद्यमान वेब स्क्रैपिङ उपकरणहरू भन्दा बढी अब प्रभावकारी नहुन सक्छ किनकि थप संस्थाहरूले आफ्नो वेबसाइटहरू बनाउन स्क्रिन गर्न असम्भव गर्न जारी राख्नेछ।. त्यसपछि, केवल तेस्रो पक्षको वेब स्क्रैपिंग सेवाहरू प्रयोग गर्ने कम्पनीहरू वा धेरै परिष्कृत उपकरणहरू छन् तैपनि ती अझै अन्य वेबसाइटहरूबाट डाटा स्क्रैप गर्न सक्षम हुनेछन्।.
अन्तमा, संस्थाहरू को लागी वेब स्क्रैपिंग को भविष्य को लागि आफु को स्थिति मा शुरू गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ. केहि आवश्यक चरणहरू जुन तपाईं विचार गर्न चाहानुहुन्छ:
1. तपाईं आफ्नो आफ्नै कृत्रिम बुद्धि-प्रेरित रोबोटहरू विकास गर्ने काममा सुरू गर्नु पर्छ जुन तपाईंको डेटा स्क्रैपिंग लाई प्रभावकारी बनाइनेछ।.
2. तपाईले तपाईको साइट बनाउन स्क्रैप गर्न गाह्रो बनाउन प्रयासमा तीव्रता पनि गर्नुपर्दछ. के यदि तपाइँका केही प्रतियोगीहरू तपाईंको वेबसाइटमा सामग्रीको सजिलो पहुँच छ भने तपाईं तिनीहरूको स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्न? सम्झनुहोस्, तपाईका प्रतियोगिहरु बारे अधिक जानकारी, उच्च तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई पराजित गर्ने संभावनाहरु.
3. तपाईले आफ्नो डेटा संगठन र विश्लेषण क्षमता सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक काम गर्न शुरु गर्नुपर्दछ. यो युद्धको अवस्था पनि मनपर्न सक्छ. कहिलेकाँही, तपाईं आफ्नो प्रतियोगी वा विरोधीहरूको कोडित जानकारीमा ठोकर लगाउन सक्नुहुन्छ. जानकारी कुनै प्रयोगको हुनेछ यदि तपाईं सकेसम्म यो डिकोड गर्न सक्नुहुन्न. धेरै अनुभवी डाटा विश्लेषकहरूले प्राय: कम गरिएको डेटामा केहि प्रवृतिहरू ठाँउ राख्दछन् ताकि तपाईले तिनीहरूलाई दोहोर्याउनु पर्छ.
संक्षेपमा, तपाईंको संगठन ठूलो डाटाको अवधारणाको लागि तयार पार्न र वेब निष्कर्षको भविष्यको लागि तपाईंको व्यवसायको दीर्घकालिक सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।.